Miaramila am-perinasa, gadra nitsoaka ny roa lahy : voasambotra ireo dimy lahy mpivarotra basy | NewsMada
Miaramila am-perinasa, gadra nitsoaka ny roa lahy : voasambotra ireo dimy lahy mpivarotra basy
Miaramila am-perinasa ny iray, misy koa gadra nitsoaka ny fonjan’i Tsiafahy, ankoatra ireo mpanera efa-dahy. Tratran’ny vela-pandriky ny polisin’ny BC tetsy Vasakaosy izy ireo, ny asabotsy teo, raha nikasa hivarotra basy. Basina mpitandro filaminana ?
Nahazo loharanom-baovao ny eo anivon’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC), sakelika fahefatra fa misy andian’olona mpivarotra basy eny Ivato. Nomena fotoana ireo andian’olona fa hovidiana ilay basy ka eny Vasakaosy ny toerana hihaonana sy hijerena ilay fitaovam-piadiana. Nametraka ny vela-pandrika avy hatrany ny polisy taorian’izay ka lehilahy iray miaramila am-perinasa no nitonona ho tompon’ny basy niaraka tamin’ny mpanera efa-dahy. Lehilahy iray hafa kosa no nitazona ilay basy ka nijanona tamin’ny toerana tsy lavitra teo. Nitsoaka avy hatrany ity lehilahy ity raha vao nahatsikaritra fa misy polisy teny amin’ny manodidina an’i Vasakaosy. Noraisim-potsiny kosa izy dimy lahy nifampiraharaha tamin’ny fivarotana ilay basy.
Fantatry ny polisy tamin’ny famotorana sy famantarana ny mombamomba azy dimy lahy fa mitondra ny solon’anarana hoe King ny iray amin’izy ireo. ”Jiolahy raindahiny nitsoaka ny fonjan’i Tsiafahy ity King ity ka tsy hita mihitsy taorian’izay kanjo izao nanohy ny asa ratsiny izao indray tamin’ny alalan’ny fikasana hanao trafikana fitaovam-piadiana”, hoy ny fanazavan’ny polisy misahana ny heloka bevava.
Miaramila manao asan-jiolahy…
Tsy takona afenina intsony izao fa miaramila ihany ny ambadiky ny asan-jiolahy sy ireny fitaovam-piadiana miparitaka etsy sy eroa ireny. Tsy mahagaga raha mihamahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana satria ireo tandroka natao hiaro ny vozona indray ity no lasa tandroka manoto ny mpiara-belona aminy. Manaratsy endrika ny fianakaviamben’ny Foloalindahiny ny fisian’ny saonjo iray lohasaha, tsy ilaozan’ny mamarara toy izao. Ahoana ny fanadihadiana ara-moraly mialoha ny handraisana ireny tovolahy hiditra ho ao anatin’ny fianakaviamben’ny mpitandro filaminana ireny? Lasa toerana fialokalofan’ireo tanora tsy mahita asa sy fieren’ny jiolahy matetika ny eo anivon’ny Foloalindahy ka na olona tsy mendrika ny hanao izany asa izany aza lasa manao izany satria tsy an’asa. Nony tonga ao anefa, izao iaraha-mahita izao ny vokany. Matoa tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy ireny basy ireny, misy ny firaisana tsikombakomba amin’ny jiolahy fa tsy ho tongatonga ho azy ireny fitaovam-piadiana ireny. Ny ankoatra izany, fanadiovan-tena avokoa. Manginy fotsiny ireo mpitandro filaminana manao asan-jiolahy mivantana. Raha tena misy ny mangarahara tokony hampahafantarina koa ny tobi-miaramila nivoahan’ireny basy ireny. Tokony hofaizina sy homena ny sazy henjena ny mpitandro filaminana mivadi-pitokisana toy izao.